Diosezin’i Farafangana Hapetraka anio ny Eveka vaovao
Hapetraka anio ao amin'ny diosezin'i Farafangana ny eveka hitantana ity diosezy ity; ny Mgr Gaetano Di Pierro. Hisy ny Sorona Masina hotarihin'ireo evekan'i Madagasikara sy ny famakiana ny taratasy manendry azy amin'io andraikitra io, niainga avy yamin'ny fanendren'ny papa François ny 3 martsa teo.
FANILO FLM - CNaPS Voasonia ny fifanekem-piaraha-miasa
Herinandro Masina Fotoana natokana hibebahana
toy ny fanabeazana, amin’ny alalan’ny fampianarana any an-tsekoly amin’ny ambaratonga rehetra na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra, ny fahasalamam-bahoaka any amin’ny hopitaly sy ny klinika, indrindra any amin’ny dispansera sy ny foibem-pahasalamana fototra faharoa, ny fampivoarana ny fiainan’ny olona. Raha tsorina dia mandray anjara mavitrika amin’ny fampivoarana ny lafiny maha olona izy ireo. Tato anatin’ny taona maromaro anefa, misedra olana goavana izahay amin’ny iraka ampanaovina anay eny anivon’ny vahoaka noho ny tsy fisian’ny fandriampahalemana manjaka manerana ny Nosy, ary manampy trotraka izany ny fahantrana lalina, hoy ny fikambanan’ny relijiozy lahy sy vavy. Olona very fanahy mbola velona sy mihorohoro sisa no ifaneraseranay. Lehilahy sy vehivavy tsy manam-piahy, mpianatra mitondra takaitra am-po no mamonjy sekoly satria saika isak’alina izy no vavolombelon’ny herisetra ataon’ny andian-jiolahy mandroba sy mirongo fiadiana. Matetika anefa rehefa voasambotra ireny jiolahy ireny dia avoaka ary miverina indray any an-tanàna mihantsy ny mponina, raha ny fanehoan-kevitr’izy ireo. Anisan’ny iharan’ny herisetra sy vono olona mahatsiravina ihany koa ny relijiozy tato ho ato, izay lasa sakana amin’ny asany. Manameloka marindrano rehefa mety ho asan’ny maty eritreritra sy ny tsy manam-panahy, ary midera ny ezaky ny mpitandro ny filaminana izy ireo. Mangataka ny hampiharana ny lalàna amin’ireo tompon’antoka tamin’iny heloka bevava nihatra tamin’ny relijiozy mba tsy ho afa-bela fotsiny amin’izao izy ireo. Aoka ny tompon’andraikitra rehetra mba handre ny antso vonjy avy aminay. Aoka izy tsy hianona amin’ny « kolontsain’ny tsy firaikàna » fa handray ny fepetra mahomby rehetra mba hanarenana izao toe-javatra izao tamin’ny taratasy misokatra nalefanay ho an’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ary ireo tompon’andraikitra ambony misahana ny fitandroana ny filaminana, hoy izy ireo.